Naas nuujinta – dhugasho
maxamedsheekafguun Maarso 9, 2020 waxbarasho
Salaam, magacaygu waa Fatxiya. Waxaan halkan u Joogaa inaan idinla wadaago qayb ka mid ah macluumaad ku saabsan faa’iidooyinka Naas-nuujinta ilmahaaga.
Naas-nuujintu waxa ay ilmaha siisaa caafimaad uu ku ababo, waana qayb gaar ah oo dhaqan keena ah. Waxaa jira Faa’iidooyin fara badan oo naas nuujintu ay leedahay, hayeeshee halkan waxaan ku soo qaadanay uun waxaan badnayn.
Sida oo kale ilmahaagu waxa uu kuu tilmamayaa marka uu Caanaha naaska ka dhergo. Wuu nefisaa, naaska ayuu sii daayaa ama hurdo ayaa qabata. Haddii uu joojiyo isku day in daaco ka timaado. Markaa, ku du’ oo u dhig naaska kale. Ha ka werwerin inaad wax badan siiso. Sida dhabiiciga ah ilmahaagu waxa uu naas nuugida joojinayaa marka uu dhergo. Si kale oo lagu garto in ilmahaagii caano ku filan cabbay, waxay tahay, saxaro ka timaada iyo culays ama cayil ku kordha.
Waxaa jira meelo badan oo kaaga jawaabi kara su’aalaha ku saabsan naas-nuujinta, kuwaasi oo ay ka mid yihiin Dhaqtarkaaga ama Ururka sharciga qaabilsan. Hayadaada maxalliga ah ee caafimaad ka bulshada ayaa iyana leh kalkaalooyin caafimaad, kuwaasi oo kugu caawin kara aqalkaaga ama telefoonka oo ay kuugu sheegi kara.